Xogyaha Qaramada Midoobay oo James Swan u magacaabay Wakiilkiisa Soomaaliya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xogyaha Qaramada Midoobay oo James Swan u magacaabay Wakiilkiisa Soomaaliya
Xogyaha Qaramada Midoobay oo James Swan u magacaabay Wakiilkiisa Soomaaliya
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterrs ayaa James Swan oo ah diblumaasi u dhashey dalka Mareykanka waxaa uu u magacaabay in uu noqdo Ergeyga gaarka ah ee xafiiska siyaasadada ee Qaramada Midoobe ee Soomaaliya(UNSOM).
James Swan ayaa waxaa uu bedelaya Nicholas Haysom oo ah nin kasoo jeeda dalka Koonfur Afrika, kaasi oo ay dowladda Soomaaliya ay shaacisay in aanay wadashaqeyn karin bilowgii sanadkan, taasi oo keentay in Qaramada Midoobey ay soo magacowdo Wakiilkan cusub.
James Swan ayaa sidoo kale horey usoo noqday Safiirka u fadhiya Maraykanka dalalka Jabuuti iyo DRC.
Diblumaasigan ayaa horey usoo qabtay xilalka ku-xigeenkii kaaliyaha xoghaya arrimaha dibada ee Mareykanka ee Afrika iyo Agaasimaha xafiiska sirdoonka & dabagalka ee Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Magacaabiista Ambassador James Swan ayaa noqoneysa markii u horeysay oo uu diblumaasi Maraykan ah xilkaasi qabto tan iyo sanadkii 1994, waxaan xilkaasi horey usoo qabtay Admiral Jonathan Howe oo uu magacaabay Xoghayihii hore Boutros Boutros-Ghali xiligii uu socday hawlgalkii Restor Hope 1993 – 1994.
Marka laga yimaado khibrada ergayga cusub u leeyahay siyaasada Soomaalida ayaa hadana ah nin kasoo jeeda wadanka Maraykanka oo ah xubin joogto ah ee Golaha Amaanka.
Dalka Maraykanka ayaa xiligan si gaar ah u daneenaya arrimaha Soomaaliya iyadoo sidoo kale la hadal hayo in laga yaabo in Militariga Maraykanka uu saldhig weyn ka furto dalka Soomaaliya, waxaa iyaduna xusid muddan in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu laftiisa heysto dhalashada dalka Maraykanka.